आजको राशिफल वि.सं. २०७५ साल कात्तिक १० गते। शनिबार। – AstroSimara.Com
आजको राशिफल वि.सं. २०७५ साल कात्तिक १० गते। शनिबार।
By Astro Sudeep Dhakal	 On Oct 26, 2018
इश्वी सन् २०१८ अक्टोबर २७ तारिख। शकसंवत् १९४०। विरोधकृत् संवत्सर। दक्षिणायन। शरद ऋतु। नेपाल संवत् ११३८ कौलागा। कार्तिक कृष्णपक्ष। तिथि– तृतीया, १९:५६ बजेउप्रान्त चतुर्थी। नक्षत्र– कृत्तिका, १०:२५ बजेउप्रान्त रोहिणी। योग– व्यतीपात, ६:३१ बजेदेखि वरियान्, २८:१४ बजेउप्रान्त परिघ। करण– वणिज, ८:३६ बजेदेखि भद्रा, १९:५६ बजेउप्रान्त वव। आनन्दादिमा ध्वज योग। चन्द्रराशि– वृष। काठमाडौंमा सूर्योदय– ६:१२ बजे, सूर्यास्त– १७:२२ बजे र दिनमान २७ घडी ५७ पला। सर्वार्थसिद्धि योग १९:५६ बजे उप्रान्त।
रक्तचापका विरामीहरुले आफ्नो रक्तचाप कम गर्न र कोलेस्ट्रल नियन्त्रणमा राख्न रेड वाइनको मद्दत लिन सक्नुहुनेछ। यसले तिनीहरूलाई धेरै आराम दिनेछ। लामो अवधिको लाभको लागि स्टक र आपसी धन लगानीमा सिफारिस गरिन्छ। परिवारका सदस्यहरूलेको हंसमुख प्रकृतिले घरको वातावरण रमाइलो हुनेछ। भावनात्मक रोकावटले तपाईंलाई समस्यामा पार्नेछन्। काममा मान्छेसँग काम गर्दा बुद्धि, धैर्य र सावधानी अपनाउनुहोस्। महत्त्वपूर्ण मान्छेसँग बातचीत गर्दा तपाईंको शब्दहरू होशियारीसँग चुन्नुहोस्। आफ्नो जोडीको कठोर व्यवहारले गर्दा तपाईं दिनभरि उदास रहन सक्नु हुनेछ।
सानो कुराले आफ्नो मनमा चिन्ता गर्न नदिनुहोस्। हतारमा निवेश नगर्नुहोस्। यदि निवेश गर्दा तपाईंले सबै सम्भव कोणबाट हेर्नु भएन भने घाटा निश्चित छ। छिमेकीसँग झगडा गर्नाले तपाईंको मुड बिग्रिन सक्छ। तर आफ्नो स्वभाव नबिगार्नुहोस किनभने यसले मात्रै आगोमा इन्धन थप्ने काम गर्दछ। तपाईंले सहयोग दिनु भएन भने तपाईंसँग कसैले झगडा गर्न सक्ने छैन। मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। आज एकोहोरो माया विनाशकारी साबित हुनेछ। आफ्नो दृष्टिकोणमा इमानदार र सही हुनुहोस् – तपाईंको सङ्कल्प र कौशलले परिचय प्राप्त गर्नेछ। कार्यक्रमहरू राम्रा र समस्यापूर्ण हुने दिन – जसले तपाईंलाई भ्रमित र थकित छोड्नेछ। आफ्नो जोडीको स्वास्थ्य केही खराब हुन सक्छ।
मित्रहरूले सहयोग गर्नेछन् र तपाईंलाई खुसी राख्नेछन्। केही अतिरिक्त पैसा बनाउन आफ्नो नवीन विचार प्रयोग गर्नुहोस्। साँझको लागि रोमाञ्चक योजना राखेर तपाईंका मित्रहरूले तपाईँको दिन रोशन गर्नेछन्। गोप्य कार्यहरूले तपाईंको प्रतिष्ठा बिगार्न सक्छ। तपाईंलाई आज काममा आफ्नो केही राम्रा कार्यहरूका लागि सम्मान गरिनेछ। आज मान्छेहरूले तपाईंको प्रशंसा गर्नेछन् – जुन तपाईंले सधैं सुन्न चाहनु हुन्थ्यो। ठूलो खर्चको कारण आफ्नो जोडीसँग तपाईँको झगडा हुन सक्छ।
स्वास्थ्यको दृश्यबाट धेरै राम्रो दिन। तपाईंको हँसिलो मनले तपाईंको इच्छित बल दिन्छ र तपाईंलाई विश्वस्त राख्नेछ। ठूलो योजना र विचारहरू भएको कसैसँग तपाईँको आकर्षण हुनेछ – कुनै पनि निवेश गर्नुअघि व्यक्तिको विश्वसनीयता र प्रामाणिकता प्रमाणित गर्नुहोस्। आफ्नो परिवारलाई उचित समय दिनुहोस्। तिनीहरूलाई तपाईंले ध्यान दिनुहुन्छ भन्ने महसुस गराउनुहोस्। तिनीहरूसँग आफ्नो गुणस्तरको समय बिताउनुहोस्। गुनासो गर्ने कुनै पनि मौका नदिनुहोस्। तपाईंले आफ्नो जीवन भन्दा बढी तपाईंलाई प्रेम गर्ने व्यक्ति भेट्नु हुनेछ। तपाईंको विश्वास बढ्दैछ र उन्नति स्पष्ट छ। यात्रा लाभदायी तर महँगो हुनेछ। यो दिन आफ्नो वैवाहिक जीवनको लागि साँच्चै ठूलो छ। आफ्नो साथी थाहा छ तपाईं उहाँलाई प्रेम कति गरौं।
आफुलाई शान्त राख्न मद्दत गर्ने गतिविधिहरुमा आफैलाई संलग्न गर्नुहोस्। तपाईं एउटा रोमाञ्चक नयाँ परिस्थितिमा आफूलाई भेट्टाउन सक्नुहुन्छ – जसले तपाईंलाई वित्तीय लाभ हुनेछ। परिवारको समस्यालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। तपाईंले यसको समाधान गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन किनभने एकपल्ट यसको समाधान भएपछि घरको माहौल सजिलो हुन्छ र तपाईंले आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई प्रभावित गर्न कुनै पनि अप्ठ्यारो पर्दैन। रोमान्सका लागि राम्रो दिन। महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग बातचीत गर्दा आफ्ना कान र आँखा खुल्ला राख्नुहोस् – किनकि तपाईंले एउटा मूल्यवान टिप पाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो शरीर र व्यक्तित्व सुधार गर्ने तपाईंको प्रयासले तपाईंलाई सन्तुष्टि दिनेछ। कठिन समयमा आफ्ना जीवनसाथीबाट सहायताको कमीले तपाईंमा निराशा आउनेछ।
मित्रहरूले तपाईंलाई कोही विशेष व्यक्तिसँग परिचय गराउनेछन् जसले तपाईंको विचारमा केही उल्लेखनीय प्रभाव पार्न सक्छ। तपाईंलाई आज धेरै नयाँ वित्तीय योजनाहरु प्रस्तुत गरिनेछ – प्रतिबद्धता बनाउनु अघि फाइदा र हानिको राम्ररी वजन गर्नुहोस्। नातिनातिनाहरू खुशी गराउने राम्रा स्रोत हुनेछन्। तपाईंको मुस्कान आफ्नो प्रियको दुख निवारणको सबैभन्दा राम्रो औषघि हो। साझेदारी परियोजनाहरूले सकारात्मक परिणाम दिनु भन्दा बढी समस्याको सिर्जना गर्नेछन् – तपाईं विशेष गरी कसैले तपाईंसँग फाइदा उठाउनको लागि आफैंले अनुमति दिएकोमा आफैमाथि रिसाउनु हुनेछ। तपाईंले आफ्नो सम्पत्तिमा लापरवाह गर्नुभयो भने हानि वा चोरी हुन सक्छ। तपाईंको जीवनसाथी कहिल्यै आजभन्दा रमाइलो थिएनन्।
पिउँदा र खाँदा होसियार हुनुहोस्। बेवास्ताले तपाईंलाई बिरामी बनाउन सक्छ। नयाँ पैसा कमाउने अवसर आकर्षक हुनेछन्। घर वा सामाजिक भेलामा भएको मरम्मतको काममा तपाईं व्यस्त हुने सम्भावना छ। तपाईंसँग बिताएको राम्रो समयको याद दिलाएर आफ्नो मित्रताको नवीकरण गर्ने समय। सबै कुराहरू नपढीकन कुनै पनि व्यापार / कानुनी कागजातमा हस्ताक्षर नगर्नुहोस्। आफ्नो प्रतिष्ठामा हानि गराउने मान्छेसँगको सङ्गत गर्न रोक्नुहोस्। आज तपाईंले आफ्नो जोडीका प्रेमको चरम देख्नु हुनेछ।
आफ्नो जोडीको स्वास्थ्यको कारण तनाउ र चिन्ता हुन सक्छ। यदि तपाईंले आज राम्रो तरीकाले आफ्नो कार्ड खेल्नुभयो भने केही अतिरिक्त नगद प्राप्त गर्नु हुनेछ। यो अवधि आफ्नो नयाँ परियोजनाहरू र योजनाको सन्दर्भमा आफ्ना आमाबाबुलाई विश्वासमा लिनका लागि राम्रो छ। तपाईंको प्रेमी जीवनले तपाईंको लागि आज साँच्चै नै अद्भुत केही ल्याउनेछ। तपाईंले सही व्यक्तिहरूसँग काम गर्नुभयो भने आफ्नो क्यारियरमा प्रगति हुनेछ। आज अनुकूल ग्रहहरूले खुसी महसुस गर्ने प्रशस्त कारणहरू ल्याउनेछन्। आज तपाईंले गुलाब झन रातो र नील लोहित झन नीलो देख्नुहुनेछ किनकि प्रेमको नशाले तपाईंलाई माथि पुर्याएको छ।
तपाईंको प्यारो सपना साकार हुनेछ। तर आफ्नो उत्तेजनालाई नियन्त्रणमा राख्नुहोस् किनकि धेरै आनन्दले केही समस्या उत्पन्न गर्न सक्छ। एउटा नयाँ आर्थिक सम्झौता तय हुनेछ र नयाँ पैसा प्राप्त हुनेछ। सुखद र सुन्दर साँझको लागि तपाईंको घरमा अतिथिहरूको भीड लाग्नेछ। तपाईंले प्रेमको पीडा अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ परियोजनाहरू र योजना लागू गर्न राम्रो दिन। आज तनाउले भरिएको दिन हुनेछ, नजिकका कर्मचारीहरूसँग धेरै मतभेद आई पर्न सक्छ। आफ्नो जन्मदिन बिर्सेको वा केही अन्य कुरा बिर्सेको जस्ता साधारण कुरामा आफ्नो जोडीसित पुरानो मुद्दामा आज तपाईं भिड्न सक्नु हुन्छ। तर, सबै कुरा दिनको अन्तमा ठीक हुनेछ।
तपाईंको सहारामा धेरैले निर्भर गर्नेछन् र तपाईंलाई निर्णय लिनको लागि मनको स्पष्टता महत्त्वपूर्ण हुनेछ। तपाईंमा छिट्टो पैसा कमाउने इच्छा हुनेछ। बच्चाहरुले यो दिन धेरै कठिन दिन बनाउन सक्छन्। तिनीहरूको चासो राख्न स्नेहको हतियार प्रयोग गर्नुहोस् र कुनै पनि अनावश्यक तनाउबाट जोगिनुहोस्। प्रेमबाट प्रेम फल्छ भन्ने याद राख्नुहोस्। अचानक आएको रूमानी हावाले तपाईंको आत्मालाई उँभो उठाउनेछ। महत्वपूर्ण व्यापार निर्णय गर्दा अरूको दबाबमा नआउनुहोस्। आफ्नो शरीर र व्यक्तित्व सुधार गर्ने तपाईंको प्रयासले तपाईंलाई सन्तुष्टि दिनेछ। आज आफ्नो जीवन साथीले भर्खरै भएका नराम्रा घटनाहरूको बिर्सेर तपाईंलाई सबै राम्रो भावना प्रकट गरेर देखाउनेछन्।
आफ्नो कार्यालयबाट छिट्टै बाहिर निस्किनुहोस् र तपाईंलाई साँच्चै आनन्द आउने काम गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। आजैको दिनको लागि मात्रै बाँच्ने र मनोरञ्जनमा धेरै समय र पैसा खर्च गर्ने आफ्नो बानीमा नियन्त्रण गर्नुहोस्। तपाईंले प्रियजनहरूसँग तर्क हुन सक्ने विवादास्पद मुद्दाहरू ननिकाल्नुहोस्। तपाईंको कार्डमा तलाउमा सुन्दर बास भेट्ने सम्भावना उँचो छ। काममा मान्छेसँग काम गर्दा बुद्धि, धैर्य र सावधानी अपनाउनुहोस्। आज गरेको निर्माण कार्य तपाईंको इच्छा अनुसार पूरा हुनेछ। आफ्नो जोडीले तपाईंलाई केही नराम्रा कुराहरूका साथै तपाईंको किशोर समयको याद दिलाउने छन्।।
सदैव युवाको रहस्य भएको हुनाले खेलको लागि केही तिर्ने गर्नुहोस्। धेरै लाभदायक दिन होइन, आफ्नो पैसाको अवस्था जाँच गरेर आफ्नो खर्च सीमित गर्नुहोस्। परिवारका सदस्यहरूले तपाईंको आशा पूरा गर्न सक्ने छैनन्। तिनीहरूलाई तपाईंको ढड्डी र लहडी पारामा काम गराउने आशा नगर्नुहोस्, बरु शैली परिवर्तन गराउने प्रयास गर्नुहोस् । तपाईंले आज अन्धो प्रेम प्राप्त गर्न सम्भव भएको पाउनुहुनेछ। आफ्नो दृष्टिकोणमा इमानदार र सही हुनुहोस् – तपाईंको सङ्कल्प र कौशलले परिचय प्राप्त गर्नेछ। कसै कसैको लागि अप्रत्याशित यात्रा व्यस्त र तनाउपूर्ण हुनेछ। तपाईंलाई आज विवाहको साँचो परमानन्द थाहा हुनेछ।
आजको राशिफल वि.सं. २०७५ साल कात्तिक ९ गते। शुक्रबार।
आजको राशिफल वि.सं. २०७५ साल कात्तिक ११ गते। आइतबार